JYP Entertainment ကို စွန့်ခွာခဲ့ရခြင်းဟာ GOT7 အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် JB အတွက် ဘယ်လောက်​တောင် ခက်ခဲပင်ပန်းခဲ့ရသလဲ | News Bar Myanmar
​တောင်ကိုရီးယားရဲ့နာမည်ကျော်အဆိုတော်အဖွဲ့ GOT7 ရဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ JB ကတော့ Arena Homme Plus နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးမှာ သူ့ရဲ့ အနုပညာရှင်ဘဝကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ JYP Entertainment ကို စွန့်ခွာခဲ့ရခြင်းဟာ မည်မျှပင်ပန်းခဲ့ရကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ တစ်ကိုယ်တော်အဆိုရှင်အဖြစ် အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်နေပေမဲ့ GOT7 ရဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ အနာဂတ်အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့အတွေးတွေမှာ အချိန်ပြည့်စိုးမိုးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
JB က “ကျွန်တော်တို့ ၇ယောက်စလုံး JYP ENTERTAINMENT ကို စွန့်ခွာဖို့ အတူတကွဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီး ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ ရှေ့ဆက်ကြဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတော့ GOT7 အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ယူမှုတွေရှိခဲ့ပြီး ‘Encore’ သီချင်းထွက်ဖို့လည်း ဦးဆောင်ခဲ့ရတယ်။
အတိတ်ကနဲ့မတူတော့တဲ့ ဖန်တီးမှုတစ်ခုကို အဖွဲ့သားတွေနဲ့အတူလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ ဂုဏ်ယူလို့မဆုံးနိုင်အောင်ပါပဲ။ ပွဲဦးထွက်ကတည်းက GOT7 အဖွဲ့နဲ့အတူတူဖြတ်ကျော်ခဲ့သမျှ၊ Leader အနေနဲ့လုပ်ဆောင်ခဲ့ရသမျှတွေကိုလည်း မကြာခဏတွေးမိနေတယ်။
ဘာတွေဖန်တီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ရသလဲ? တကယ့်လက်တွေ့မှာလည်း အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချပြဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရတာတွေက အခု JB ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာစေခဲ့တာလား? စသဖြင့် အတွေးများနေမိတယ်။ ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်သမျှဟာ အားလုံးအတွက် မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်စေချင်မိတယ်။
အနုပညာလောကထဲကို ခြေချခဲ့ပါပြီဆိုကတည်းက လက်တွဲခဲ့တဲ့ JYP ENTERTAINMENT ကို စွန့်ခွာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း အရာရာကို အစကနေပြီး စတင်ဖို့ကြိုးစားရပါဦးမယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းက စိတ်ဖိစီးမှုများလာတာကြောင့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်ဟာ စိတ်ကျရောဂါခံစားနေရတယ်ဆိုပြီး အဖြေထွက်လာခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်က သူများနဲ့ယှဥ်ရင် စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်တယ်လို့ထင်နေခဲ့တော့ ဒီရောဂါဖြစ်နေမှန်း မရိပ်မိခဲ့ဘူး။ အခုတော့ လိုအပ်တဲ့ကုထုံးတွေနဲ့ စနစ်တကျကုသနေတာမို့လို့ စိတ်အခြေအနေဟာ ပြန်လည်သက်သာလာပါပြီ။ တရားထိုင်တာကလည်း စိတ်ကိုသက်သာစေတယ်။ အခုတော့တော်တော်လေးကို နေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေလာပြီ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ၊ ခံစားချက်တွေကို ပရိသတ်တွေထံဝေမျှပေးခဲ့ပါတော့တယ်။
Idol တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရတာနဲ့အမျှ JB အတွက်လည်း ခက်ခဲခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေ၊ အချိန်တွေ၊ တာဝန်ယူမှုတွေရှိခဲ့မှာမို့လို့ အနာဂတ်လမ်းခရီးကိုဖြတ်သန်းတဲ့အချန်မှာတော့ အဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အနုပညာအရည်အသွေးပြည့်ဝသူဖြစ်တာမို့လို့ ရှေ့ဆက်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေဦးတော့မှာပါ။
Next အလုပ်တူတူတွဲလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ BTS ရဲ့ နှိမ့်ချရိုင်းပင်းတတ်တဲ့ စိတ်ထား »
Previous « ဗီဒီယိုထဲမှာ ၄ စက္ကန့်မျှ ပါဝင်ရုံနဲ့ $537 တန် ရှပ်အင်္ကျီကို ​​ရောင်းကုန်​အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ Jimin